Real Madrid Oo La Sheegay Inay Diyaar U Tahay Dhegaysiga Dalabyada Morata
HomeSpainReal Madrid Oo La Sheegay Inay Diyaar U Tahay Dhegaysiga Dalabyada Morata
03/05/2014 Abdiwahab Ahmed
Kooxda Real Madrid ayaa la sheegay inay diyaar u tahay inay dhegaysato dalabyada uga imanaya kooxaha kale ee doonaya weeraryahanka da’da yar ee Alvaro Morata oo qandaraaska uu kula joogo kooxdaasi ku egyahay sannadka dambe ee 2015.
Sida ay xalay qortay shabakadda ciyaaraha ee Goal.com, waxa ay Real Madrid u diyaar garoobaysaa inay qiimayso dalabyada kooxaha ee ciyaaryahankan 21jirka ah, oo beryahanba la hadal hayey inuu ka tegayo kooxdaas kadib markii uu ka waayey boos joogto oo uu uga ciyaaro.
Ciyaaryahankan mustaqbalka wanaagsan, ayaa waxa soo dalbaday kooxo badan, waxaana la aaminsan yahay in Madrid ay qiimaynayso xaaladdiisa. Madaxweynaha cusub ee kooxda Inter Milan Erick Thohir ayaa dhawaan qiray inuu jecelyahay in ciyaaryahankani yimaado Talyaaniga oo uu xidho funaanadda Inter Milan. Waxa kale oo lala xidhiidhiyey inay doonayaan kooxaha Juventus, Napoli, Borussia Dortmund iyo Arsenal.
Inkasta oo ay arrimahaas oo dhami jiraan, haddana Real Madrid ayaa waxay u aragtaa Morata inuu muhiim u yahay, waxaanay rajaynaysaa inuu sii joogo Madrid.
Tababare Ancelotti ayaa dhawaan warbaahinta u sheegay in Morata ay u baahan yihiin oo aanay ogolaan doonin inuu ka tago. “Morata si fiican ayuu u shaqaynayay xili-ciyaareedkan, waxaanan rajaynayaa inuu sii joogi doono Madrid. Waanu u baahanahay, waxa uu haystaa fursad uu kula mid noqon karo Karim Benzema iyo Cristiano Ronaldo.” Ayuu yidhi Ancelotti.
Sida ay shabakaddu qortay, ma jirto wax damaanad ah oo uu Morata ka helayo kooxdu uu ku biiro oo ah inuu helayo boos joogto ah oo uu ka ciyaaro.
Morata waxa uu kooxdiisa u ciyaaray xili-ciyaareedkan 19 kulan, waxaanu u dhaliyey 6 gool, laakiin waxa uu inta badan ku qaatay kursiga kaydka isaga oo laga door biday Benzema.
Kooxda ka dhisan Madrid, waxa ay rajaynaysaa inay heshiis la gaadho Morata bishan dhamaadkeeda, iyadoo haddii ay arrintaasi hirgeli weydana laga yaabo in lagu iibiyo €12 milyan.